Dowladda Itoobiya oo muujisay danta ay ka leedahay Soomaaliya – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 January 7 Dowladda Itoobiya oo muujisay danta ay ka leedahay Soomaaliya
Dowladda Itoobiya oo muujisay danta ay ka leedahay Soomaaliya
Muqdisho, 07 January 2016: Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay qorshaheeda ku aadan in ay sare u qaadayso ganacsiga ay la leedahay wadamada dariska ah, gaar ahaan Soomaaliya.
Gebiresilasie Gebiregziabiher oo agaasimaha guud ee machadka Ganacsiga Niil ee ka tirsan wasaaradda arrimaha dibada Itoobiya, ayaa sheegey in wadamadani ay kala yihiin Soomaaliya, Sudan, Kenya, iyo Jabuuti.
Tusaale ahaan Soomaaliya oo kale, ganacsiga kala dhaxeeya waxa lagu qiyaasayaa 330 malyuun oo doolar, wuxuuna noqonayaa xadka ugu badan.
Ganacsigan ayaa waxaa qeyb ka noqonaya dhismaha kaabayaasha sida waddooyinka, qadadka tareenada iyo balaarinta dekedaha.
Itoobiya waxa ay heshiisyo ganacsi la leedahay wadamada Sudan oo ay la saxiixatay 2002-dii, Kenya oo ay la saxiixatay sanadkii 2012-kii iyo waliba Jabuuti , dhamaantoodna waxaa aad sare ugu kacay xaddiga ganacsiga.
Tusaale ahaan Sudan oo kale ganacsiga labada dal ka dhaxeeya waxa uu gaaray 184 milyan sanadkii 2014-tii, halka markii heshiiska la saxiixayay sanadkii 2002-dii uu ganacsiga dhanaa hal milyan oo kaliya.
Dalka Itoobiya ayaa waxa uu sanadihii dambe sameynayay horukac weyn oo xagga dhaqaalaha ah, iyada oo diirada la saarayay dhanka ganacsiga, taasoo ay rabto in ay Soomaaliya ugu soo dhawaato.
Prof. Dr. Abdullahi oo xarun caafimaad ka furay degmada Howlwadaag February 7, 2018
Beesha Caalamka oo Amarki ugu danbeeyay siisay Madaxda Soomaaliya waqtina u qabtay. January 20, 2016
Shirka Arimaha Somalia Ee London oo socda May 11, 2017
Maxay ka tiri Wasarada Amniga qaraxii xalay ee Muqdisho ? August 11, 2017
Ciidamada Taraafikada oo lagu Hayo Handadaad iyo Aflagaado Xad Dhaaf Ah. April 10, 2017
DAAWO: Beesha Murusade oo qaadata dhamaan kuraasta beesha Karanle January 18, 2017
Can Somalia Hold Elections in 2016? April 18, 2016
DHagayso:-R/Wasaare Kheyre Oo Kahadalaly Shirka Dhawaan Kafurmidoona London April 28, 2017
Somalia’s Solar-Powered Recovery November 8, 2017
Kalfadhigii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka oo maanta furmaayo. April 10, 2016
Masar oo ka hadashay weerarkii Buulo Guduud September 4, 2017
UN fears ‘manipulation’ as Somalia delays elections September 28, 2016
Jen. Cadde Muuse Xirsi “Waa nasiib darro in xalinta colaada Gaalkacyo loo aado Kismaayo” November 14, 2016
After the critical Africa visit June 8, 2016